Wacdaraha Galmada Ay Dumarku Jecelyihiin & Ragga Ku Xeeldheer…… | shumis.net
Home » galmada » Wacdaraha Galmada Ay Dumarku Jecelyihiin & Ragga Ku Xeeldheer……
Wacdaraha Galmada Ay Dumarku Jecelyihiin & Ragga Ku Xeeldheer……
Qaabka rukuubka dumarku aad ayey uga helaan waa qaabka ay ayagu kor marayaan sidii ay Saaranyihiin faras oo kale waa qaab ay mar walbo daneeyaan sababahan soo socda:
Maxaa yeelay waxay dareemayaan in ay ayagu meesha darawal ka yihiin in aad gaarto barta Kacsiga in ay ay xor u tahay is ruxid kasta iwm
Waxaad u jiifsanaysaa dhabarka lugahaagana waad fidinaysaa ka dib ayada oo qaawan Islamarkaana aad hubsatay in ay kacsantahay ayaa kor kaaga imaanaysa waxaad hubinaysaa Dhowr waxyaalood
In ay lugaheedo kala durugsanyihiin in aad ku taageerto dhanka miskaha adiga oo ka Qabanaya miskaha siiba dhanka dhabarka u dhow.
Maxaa lagama maarmaan ah;
Waxaa lagama maarmaan ah in aad u salaaxdo bodyaha barida iyo dhabarka xaluska iyo Caarada hore ee naasaha, waxaa hubaal ah marka aad intaas ku dhaqaado in qoftaada ay u Duulayso meelo aysan waligeed gaarin.
Habkan waa hab qadiim ah oo waligiis soo jiray waana habka ugu badan ee dadku Adeegsadaan waa hab cajiib kiisa wata maxaa yeelay indhahaaga ayaa ku dul dhacaya Indhaheeda ayaga oo mudaya kana dhex dusaya.
Waad garanaysaa qofta ayaa u jiifsanaysa dhabarka waxaadna hubinaysaa in ay lugaheedu Joogaan halkii ugu wanaagsan luguhu waxay noqonkaraan kuwo aad gacantaada ku qabatid Ama kuwo aad xoriyad siiso si ay u daalaan iskood.
Maxaa lagama maar maan ah:
Waxaa laganma maar maan ah in aad ku qabato qoftaada awood badan adiga oo aan u Ogolaanayn jaanis ay ku neefsato ku soo dhowee afkaaga ama afka afka u gali yacni beeshi Ku qabo
Waa maxay istaaga kacsigu waa habka ugu kulul ee dumarku ay jecelyihiin waxaay ku dul Fariisanysaa meel dheer oo gaaraysa ilaa dhexdaada adna waxaad u dhegalaysaa si aad u Daran inta aad awoodo ayaad ku fogaynaysaa waxay kugu wareejinaysaa lugaheeda Dhexdaada haday doontto waxayna salaxi kartaa xabadkaaga. geedkeedu waxa uu si toos ah U abaarayaa gumaarkaaga taas oo kuu sahlaysa in aad si wanaagsan ugu cayriso. waxaad u Baahantahay kursi dheer ama jikadada xageeda la aad.
Waxaa hu:baal ah rag badan in ay ku daalaan qaab oo ay noqdaan kuwo dhacsaal ah fadlan Waxnba ha ordin u nas naso is la markaana adb biririf u qaado. inta aad ku jirto waqtiaga Biririfta uga faa’iidayso in aad salsalaaxdo malablaheeda.
Gadaal ka joogsi:
Waa gaab keana xaalado farxadeed maxaa yaalay dumarku waa ay ka helaan in ninkooda Xabadkiisu uu ku aadanyahay dhbarkooda;
Gacmahaaga waa in ay ku wareegsanyihin isla makaana waa in aad taataabataa naasaheeda Iyo malabkeeda si ay u dareento raaxo saa id ah.
Barideeda ku cadaadi gumaarkaaga cajaradana aad uga salaax.
Marna ha illoowin in aad tuutuujiso malabkaada iyo xaluskeeda aadna qandhuuf yar ku Qabqabato caarada hore ee nnaasaheeda.
Waxaa la arkaa oo laga yaabaa in ay cajiib kula noqoto in dumarka soomaalidu ay ka Cabsadaan badi qaababka ayno kor ku soo sheegnay,
Hadaba maxaa keena baqdintaas ay dumarkeenu ka qabaan qaababkaas.
Fikirkaaga noo soo dir si aan dadka ugu gudbino waxa sababa in dumarka soomaalidu ay ka Cabsadaan in ay isku dayaan raaxada noocayadeeda kala duwan.
Waxaad kaloo noosoo sheegtaa habka aad adigu ka hesho.
Title: Wacdaraha Galmada Ay Dumarku Jecelyihiin & Ragga Ku Xeeldheer……
Posted by Unknown, Published at March 13, 2017 and have 0 comments
Meela Ugu Macaan ee Dumarka Carabka Laga Galiyo Macaanee La Dhareeraayaan?
Hubaal waxaa ah Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) in ay tahay talaabada ugu horeeysa ee Weerarka Galmada , waxaa...
Wasmo dhuuqmo siigo iyo salsalaax
inta badan Raga Ma aaminsan in salaaxa iyo Hordhaca Ciyaarta sariirta. Micno weyn uleedahay dumarka hasa ahaatee Weey uga qiima badantahay ...